ज्योतिषको नजरमा चुनाव: पञ्चकमा मनोनयन, कालसर्प योगमा चुनाव ! कांग्रेस, एमाले बृश्चिक राशीमा , माओवादी केन्द्र सिंहमा र फोरम लोकतान्त्रिक मेष राशिमा
—ज्यो.पं.पद्मभक्त खरेलोपाध्यायः दिव्यचक्षु ।
स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, निष्पक्ष चुनाव भयो भने असोज र मंसिरमा हुन गैरहेका चुनावहरु गठवन्धन सरकारलाई अनुत्पादक हुने स्थिति ग्रहहरुले देखाई रहेका छन् । असोज २ गते राहु र केतुको घेरामा बसेर ग्रहहरु कालसर्प योगमा परेका छन् । यो योगले स्थानीय तहको चुनावपछि सरकार ढल्नेसम्म गराउन सक्छ ।
मंसिर १० गतेको प्रदेशसभा र केन्द्रको चुनावका दिन पञ्चक योग परेको छ । शुभ कार्यका लागि कालसर्प मात्रै होइन, पञ्चक योग पार्नु हुँदैन । तर दुवै चुनावमा पालैपालो कालसर्प योग र पञ्चक योग पर्न गएका छन् । यी दुवै योग शुभकार्यका लागि राम्रो मानिदैन । संसद पुनस्र्थापना गर्दाका दिन पञ्चक योग पर्न गएकाले स्थिति अझै सङ्लिएको छैन । पञ्चक योग तथा कालसर्प योग विघ्नबाधाको प्रतीक हो । यस्तो विघ्नबाधामा चुनाव हुन गैरहेको छ ।
तेस्रो चरणको स्थानीय तहको दुई नम्बर प्रदेशको चुनावको पूर्व सन्ध्यामै टिकटको विषयलाई लिएर विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरु बिच्किएर आफ्ना नेताका घरहरुमा ढुङ्गा हान्ने, नेताकै घरमा ताल्चा लगाएर थुन्ने कार्य कतै गरिरहेका छन् भने कतै पार्टी कार्यालयमा ताल्चा लगाएर उधुम मच्चाउँदै छन् । कतै गठवन्धनका नाममा असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् ।
सबै काम ग्रहहरुकै कारण भैरहेका छन् । चुनाव धाँधलीरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भयो भने जनताले मन पराएका उम्दा उम्दा इमान्दार नेताहरु चुनिने छन् । तर ग्रहहरुको स्थिति हेर्दा शक्ति, पैसा, मस्सल र गुण्डागर्दीले जित्नेलाई हार्ने र हार्नेलाई जित्नेसम्म बनाउन सक्छ । सबै पार्टीहरुले आफ्ना प्रभाव क्षेत्रहरुमा यस्तो नीति अपनाउने छन् । तोकिएको उम्मेदवार जित्ने अवस्था आएन भने मिलेमतोमा ठाउँ ठाउँमा भरतपुर काण्ड यही कालसर्प योगले दोहो¥याउन सक्छ ।
चुनावमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा, फोरम लोकतान्त्रिक र सङ्घीय समाजवादी फोरम समेतका सबै दलले आफ्नो पार्टी दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो हुने दावी गरेका छन् । पहिलो नभए दोस्रो हुन्छौं, कुनै पार्टीले भनेका छैनन् । भोट उनीहरुकै खल्तीमा छ कि जस्तो गरिरहेका छन् ।
२०७४ असोज २ गतेको चुनाव लग्नबाट हेर्दा कस्को के स्थिति हुन्छ ? हेरकोर गराए थाहा भैहाल्छ । पार्टीहरुका नाम अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा संयुक्त र नयाँ शक्ति बृश्चिक राशिमा पर्छन् । नेपाल राष्ट्रको राशि पनि बृश्चिक हो । बृश्चिक राशिलाई अहिले यतिखेर अन्त्य र मध्य साँढेसाती चलिरहेको छ । त्यस्ते मेष र सिंहलाई २०७४ ज्येष्ठ ६ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म अढैया शनिदशा चलिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र सिंह राशिमा र फोरम लोकतान्त्रिक मेष राशिमा पर्दछ । राजपा र राप्रपाहरु तुला राशिमा पर्दछन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम कुम्भ राशि हो । तुला राशिलाई २०७४ ज्येष्ठ ६ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म अन्त्य साँढेसाती दशा चलिरहेको छ ।
जानी राख्ने कुरा के छ भने मकर र कुम्भ राशिलाई साँढे साती वा अढैया शनिको दोष लाग्दैन । किनकि मकर र कुम्भका स्वामी शनि हुन् । मेष, बृष, मिथुन, कन्या, तुला, बृश्चिक, धनु र मीन राशिलाई साँढे साती वा अढैया शनिले सामान्य प्रभाव मात्रै पर्छ भने कर्कट र सिंह राशिलाई साँढे साती वा अढैया शनि दशाले तीव्र अनिष्ट पल अर्थात् प्रखर प्रभाव पार्दछ । यसैको सेरोफेरोमा पार्टीहरुको हारजीत हुने गर्दछ । उम्मेदवारहरुको हारजीत पनि ग्रहहरुकै प्रभावका कारण हुने गर्दछ । लाहानमा वम पड्कियो । नाम अनुसार लाहान मेष राशिमा पर्दछ । मेष राशिको अढैयाले त्यहाँ त्यस्तो फल प्राप्त भएको छ ।
असोज २ गतेको ग्रह गोचरको चन्द्र फल अनुसार मेष राशिका लागि त्यसदिन कृष्णपक्षको चन्द्रमा राशिदेखि पञ्चमभावमा रहन गएकाले सोचे जस्तो फल प्राप्ति हुँदैन । कार्यनाश गराउँछ । सिंह राशिका लागि चुनाव लग्न कुण्डलीदेखि चन्द्रमा १२ औं भावमा पर्न गएकाले धननाश गराउने हुन्छ । तुला राशिबाट चन्द्रमा ११ औं स्थानमा बसेको अवस्था हुँदा विविध लाभ लगाउने हुन्छ । वृश्चिक राशिको चन्द्रमा राशिदेखि १० औं स्थान राज्यस्थामा बसेकाले सुखप्राप्ति हुन्छ । मेहनत अनुसारको फल प्राप्ति हुन्छ । कुम्भ राशिबाट चन्द्रमा सप्तम स्थानमा रहेकाले पुरुषहरुको दाँजोमा महिला उम्मेदवारहरु बढी जित्ने देखिन्छ ।
सूर्यको ग्रह गोचरबाट हेर्दा मेष राशिदेखि सूर्य छैठौं भावमा रहेकाले रिपुनाश गराउँछ । सिंह राशिका लागि राशिदेखि दोस्रो स्थानमा सूर्य भएकाले हानि र भय गराउँछ । तुला राशिका लागि राशिदेखि १२ औं भावमा सूर्य रहन गएकाले द्रव्यनाश गराउँछ ।
बृश्चिक राशिदेखि एकादश स्थानमा सूर्य रहन गएकाले चुनावमा खर्चको कमी हुने छैन । यथेष्ठ वित्तलाप हुनेछ । कुम्भ राशिका लागि सूर्य राशिदेखि अष्टम स्थानमा सूर्य फसेकाले अनेक प्रकारका झन्झटमा फस्नु पर्नेछ ।
शनिको स्थिति हेर्दा सिंह राशिको सुख भावमा शनि बसेकाले शत्रुवृद्धि, मेष राशिको अष्टम भावमा शनि रहेकाले शरीर पीडा, कुम्भ राशिको कर्म भावमा शनि बसेकाले आपसमा वैमनश्य गराउने, तुलाको द्वितीय भावमा शनि रहेकाले चुनावका लागि वित्तलाभ गराउने र बृश्चिकका लागि टक्कर गराउँछ ।
अन्य ग्रहहरुको स्थिति हेर्दा मेष राशिका लागि बुध, मंगल, शुक्र, राहु प्रतिकूल छन् भने बृहस्पतिले चाँहि मानवृद्धि गराई रहेको छ ।
सिंहका लागि जम्मै ग्रहहरु प्रतिकूल छन् । तुला राशिका लागि बृहस्पति र राहु प्रतिकूल छन् भने बुध, मंगल र शुक्र अनुकूल छन् । बृश्चिकका लागि राहु बाहेकका मंगल, बुध, बृहस्पति र शुक्र अनुकूल छन् । बृश्चिक राशिलाई चन्द्रमा, मंगल, बुध र शुक्रले पूर्ण दृष्टि दिएर शुभ फल प्रदान गरिरहेको छ । बृहस्पति बाह्य भावमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बनाएको छ । राहुले पापकर्म गराउने भन्नाले चुनावमा शक्ति प्रदर्शन गराउने हुन्छ ।
कुम्भ राशिका लागि बृहस्पति र राहु अनुकूल बनेका छन् भने मंगल, बुध र शुक्र प्रतिकूल रहेका छन् । समग्रमा पहिले जस्तै बृश्चिक राशि भएका पार्टीहरु नै पहिलो, दोस्रो हुनेछन् । मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन २०७४ भदौ २१ गते बुधवार पञ्चक योग पर्न गएको छ । पञ्चकमा मनोनयन भयो भने कालसर्पमा चुनाव हुँदैछ ।
२०७४ भदौ २१ गतेको पञ्चक योगका कारण सिरहामा कांग्रेसीहरु आपसमा कुटाकुट, खुकुरी हानाहान तथा लाहान र महोत्तरीको बर्दीवासमा वम विस्फोट, बीरगञ्जमा कार्यकर्ताको अवमूल्यन भयो भनेर माओवादीका कार्यकर्ताहरुले विरोध जुलुश निकालेका छन् ।
उनीहरुले पार्टीको झण्डा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्ला जलाए । त्यस्तै राजपाभित्रको टिकट वितरणको भाँडभैलो सतहमा आएर महामन्त्री विमल श्रीवास्तव सहितका कैयौं नेताहरु लोकतान्त्रिक पार्टीमा पैवेश गरेर बीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा टिकट लिन सफल भए ।
यो त प्रारम्भिक दृश्य मात्रै हो । यस्ता असन्तुष्ट पक्षहरुले गठवन्धनलाई अन्तर्घात गर्ने भएका छन् । यो कसैको दोष होइन, पञ्चक योगमा मनोनयन कार्यक्रम राखिएको फल हो । इति शुभम् ।